Amniga Xarunta Baarlamaanka oo laga hadlay”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Amniga Xarunta Baarlamaanka oo laga hadlay”SAWIRRO”
Iyadoo lagu wado in Kalfadhiga 6 aad Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu furmo bartamaha bishan Abriil ayaa maanta kulan looga hadlayey amaanka xarunta Baarlmaanka dalka waxaa ku yeeshay xaruntaasi gudiga Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka ee Baarlamaanka,sarakiilsha hay’adda Amniga dalka iyo kuwa AMISOM ee qaabilsan ilaalinta xarunta golaha shacabka.
Kulanka ayaa waxaa warbixino la xariira Amniga xarunta Baarlamaanka ka dhageysteen saraakiisha laamahan Amniga dalka iyo kuwa AMISOM iyo qaabka loo sugayo amniga xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed iyo arimo kale uu muhiim ah.
Gudiga iyo sarakiilsha amniga ayaa markii uu soo gebagaboobey kulankoodu waxaa ay kormeer ku sameyeen qeybaha kale duwan ee xarunta Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, kaasi oo u jeedkiisu aheyd hubinta Amniga xarunta Baarlamaanka oo dhowaan uu furmi doono Kalfadhiga 6 aad.
Hogaanka kormeerka Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed Sareeyo guuto Axmed Dayib warbaahinta qaranka la hadalay ayaa sheegay in xogaha la xiira amniga xarunta ay lawadaagi doonaa madaxda ugu saraysa dhinaca Aminga.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow guddoomiye ku xigeenka gudiga Arrimaha gudaha iyo amniga ee Baarlamaanka Soomaaliya isna la hadlay warbaahinta qaranka ayaa tilmamay in kormeerkan uu qayb ka yahay adkeynta amniga xarunta golaha shacabka oo gudigu uu sameeyo Kalfadhiga kasta marka uu furmaayo.
Guddoomiyaha gudiga Arrimaha gudaha iyo Amniga Baarlamaanka xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ugu baaqayo in ay ka qeyb qaataan nadaafadda xarunta golaha Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ku jira fasaxooda Dastuuriga ah ayaa qaar kamid ah mudaniyaasha Baarlamaanka waxaa ay kormeero ku marayaan deegaanada ay ka soo jeedaan si ay warbixino ku saabsan xaaladda deegaanadaasi ay horkeenaan golaha Baarlamaanka halka kuwo kale ay safari dalka dibadiisa ah ay ku maqan yihiin.
Sawir Qaade: Maxamed C/kaahi Fereysane
Madaxweynaha Koonfur galbeed oo maanta gaaray Afgooye
Wasiirka Cadaaladda oo tababar u soo xirey 17 Xeer ilaaliye”SAWIRRO”